Facebook သုံးပုံကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ်ထား နဲ့ စွဲလမ်းမှုများ
Home General Knowledge Facebookသုံးပုံကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ် ထားနဲ့စွဲလမ်းမှုများ
Facebookသုံးပုံကနေ သိနိုင်တဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ် ထားနဲ့စွဲလမ်းမှုများ
နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ လူတွေဟာ ပြင်ပလောကထက် အွန်လိုင်းကို အာရုံစူးစိုက်လာကြပါတယ်။ Facebook,twitter, youtubeစတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို သူတို့ဘ၀အတွက် အရေးတစ်ကြီး မရှိမဖြစ် အရာတွေလို့မှတ်ယူလာခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိကာလမှာ လူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာသုံးနေတဲ့ Facebookကို စွဲလမ်းသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေကြတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ဟာ Facebookကိုစွဲလမ်းနေပြီလား? ဘာကြောင့်စွဲလမ်းနေတာလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးချင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့ အောက်က ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့်၅ ဆင့်ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်..
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ သတင်းတွေ အတင်းတွေ ကြည့်စရာတွေ စိတ်၀င်စားစရာ သူများတွေရေးထားတဲ့စာတွေ ပြီးတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။ သင်ဟာတစ်နေ့တစ်နေ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါက မဆင်းနိုင် အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ အချိန်တွေဆွဲ ခေါင်းတွေမူးနောက်လောက်တဲ့အထိ သုံးနေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ FBစွဲလမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ ဖေ့ဘွတ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးသင့်ရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာတွေကိုအချိန်ပြည့် ကြည့်နေမယ့်အစား အချိန်ကန့်သတ်ပြီးကြည့်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လူမှုရေးအရ ခနတဖြုတ် တက်သုံးတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ရပါမယ်။
ဖေ့ဘွတ်ဟာ သင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ထဲက ပြင်းပြင်းပြပြသိပြီး အသုံ းပြုချိန်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ကြကြည့်ပါ။ ဒီတော့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်နေပေမယ့် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က မဆင်းဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အချိန်ဆွဲတတ်သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်ကသင့်အချိန်တွေအများကြီးကိုခိုးထားပါတယ်နော်..
FacebookမှာOver Sharingလုပ်လွန်းတာဟာ အထီးကျန်ခြင်း သို့ မငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်
ဖေ့ဘွတ်ဟာ တစ်နေ့လုံး နာရီတိုင်းနာရီတိုင်းမှာ ပြသနေတဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ နေ့လည်စာစားဖို့အတွက် လူတိုင်းကို ပြောပြနေဖို့ သင်လိုအပ်ပါလာသလား? ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို သံသယဖြစ်မိတယ်။ လူတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူတို့ သင့်ကိုလေးစားဖို့ဖြစ်ဖြစ် ဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေကို မျှ၀ေနေတာဖြစ်သင့်ရဲ့လား?
တစ်ကယ်က ဒီလို သေးပေါက်တာ ဓါတ်လှေကားစီးတာကအစ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တက်ရေးတာဟာ မင်းဟာ အထီးကျန်နေတာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာပါ။
နောက်မင်းသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အမြင်ကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တက်တောင်းနေတာမျိုးဟာ မင်းဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်မာသူ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းသူလို့ဖော်ပြနေတာပါပဲ။ တကယ်လို့ မင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ အကြံပေးချက်ရခဲ့မယ်ဆို မင်းအတ္တကိုကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မင်းအပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
Facebookကလူတွေကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ဖို့လွယ်ကူအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ မင်းဟာ မင်းရည်းစားဟောင်းရဲ့ Profileထဲကို ၀င်ကြည့်မယ်၊ ၀င်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် မင်းဟာခုချိန်ထိ အတိတ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ အ တိတ်က မလွတ်မြောက်သေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာမကောင်းပါဘူး။ မင်းEXအကောင့်ထဲ ၀င်ကြည့်လိုက် ဆွေးလိုက် ကြေကွဲလိုက်နဲ့ ကြာလာရင် စိတ်ဝေဒနာပါ ခံစားရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီအခြေအနေကရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်ရာ ပညာရှင်တစ်ဦးဦးနဲ့ပြသဖို့လိုပါတယ်။ နောက််တစ်ခုက မင်းအရူးအမူးကြွေနေတဲ့ Crushအကောင့်ထဲ ၀င်၀င်ချောင်းလိုက် ၀င်ပြီးကြည့်လိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ့်အစားသူတို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ စာတစ််စောင်စပို့ပါ။ စကားပြောကြည့်ပါ၊ အဆင်ပြေရင် အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းပါ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ အဲ့ဒီလိုခိုးကြည့် ဝင်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေ သူတို့ဘ၀ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုပြီးပုံမှန်စစ်ဆေးတာတွေကို အမြဲတမ်းလုပ်နေတာဟာ မိမိကိုယ်ကို အနာတရ ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြင်ပလောကမှာ ခက်ခဲတဲ့ တခြားလူတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကို နှိုင်းယှဉ်မိခြင်းကိုလည်း ဖေ့ဘွတ်ကလွယ်ကူအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တခြားလူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မကျေနပ်လိုက် မနာလိုဖြစ်လိုက် ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်notificationတွေကို စွဲလမ်းစွာစစ်ဆေးခြင်းဟာ စိတ်မရှည်ခြင်း သို့မဟုတ် လူများနှစ်သက်တာကို သဘောကျတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်
facebookက သင်တို့ကို စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အများကြီး လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်က အနီရောင် သတိ ပေးချက် notificationတွေကို မြင်လိုက်ရတိုင်း သင့်ဦးနှောက်က ဒိုပါမင်း(dopamine)တွေကို လက်ခံရရှိပါတယ်။
ဒိုပါမင်းဆိုတာက ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူက အစားအစာ၊ လိင်ကိစ္စ နဲ့ဆေးဝါးတွေကနေ ကျေနပ်နနှစ်သိမ့်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမယ့် ဒိုပါမင်းက သင့်ကိုသင်ဖျက်ဆီးပစ်အောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုကြပါစို့ သင်ရေးတာ တင်တာတွေLikeလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတာ သင့်ကိုလူတွေကြိုက်တယ် စိတ်၀င်စားတယ် လက်ခံတယ်ဆို သင့်ကျေနပ်မှုက ကောင်းနေမယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ရေးတာတွေက လိုသလောက် Like,share မရတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို ဆုံးရှုံးစေပြီး တခြားလူတွေကို သင့်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လာဖို့ သင်အပူတစ်ပြင်းကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီးတာနဲ့ notificationကိုပဲစောင့်နေပါလိမ့်မယ်။ အနီရောင်လေးမတက်လာတိုင်း လူတွေကို မကျေနပ်သလို သင့်ကိုသင် အားငယ်မှုတွေခံစားရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မရှည်သလိုခံစားရပြီး သင်လိုချင်တာတွေမြင်ရရင်တော့ ကျေနပ်ဝမ်းသာနေပါလိမ့်မယ်။
Newfeedကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတတ်တာဟာ တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးခြင်းကို ကြောက်ရွံတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်
တစ်ခုခုကို ပျောက်ဆုံးမှာစိုးရိမ်နေတာကြောင့် သင်ဟာ new feedကို ခနခန ကြည့်နေတတ်တာဟာ သင့်ရဲ့ အာရုံတွေကို ပျက်ပြားစေပါတယ်။ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့updateအသစ်တစ်ခုခုကို သင်လက်လွတ်မခံချင်တာကြောင့် ကားမောင် းနေတုန်းမှာလည်း စာတွေကိုစစ်ဆေးမယ်၊ လမ်းလျောက်နေရင်းလည်း ကြည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့။
ဒါတွေက သင့်အသက်အန္တရယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတာဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေး သင်သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Facebook စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်နော်..အိုကေ ဒီစွဲလမ်းမှုတွေထဲက ဘယ်လိုရုန်းထွက်နိုင်ကြမလဲဆိုတာ ကျွန်တော် နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ မျှ၀ေပေးထားပါတယ်.စောင့်မျှောကြည့်ရှု အားပေးကြပါဦးနော်..
Previous articleဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်တတ်ခြင်းက Safe ဖြစ်ပါသလား?
Next articleခရီးသည်တွေရဲ့ ဘယ်လိုအမူအယာတွေကို လေယာဥ်မောင်/မယ်တွေက သတိထားလေ့ရှိသလဲ